Ngoku ungalayisha ukuhlela kwakho ukuze wabelane nabanye kwiLightroom | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe Lightroom ikwathathe uhlaziyo olunomdla ukuba besingafuni kudlula kula malungu. Inguqulelo entsha ezisa nesakhono sokwabelana ngamahlelo nabanye abasebenzisi kwaye ke ngoko uthathe inyani efanayo yokwabelana kule nkqubo inkulu yeAdobe uye kwelinye inqanaba.
Kodwa ayisiyi kuhlala le nto apha kuphela, kodwa kuhlelo olunye abanalo ithambekele ekuphuculeni ulawulo, ukuhamba komsebenzi okuguquguqukayo ngakumbi, kunye nokusebenza okuphuculweyo ngokubanzi.
Ezi ntsuku ziye zanceda kakhulu kolu hlaziyo kuzo zombini iinkqubo zeAdobe, ezinje nge Umzekeliso, Photoshop Kunye nokongezwa okutsha: Ikhamera ye-Adobe PS. Ngoku sinako yongeza uhlaziyo olutsha lwe-Lightroom kunye neeKhokelo zeTutorials kwaye zihamba kunye nokwabelana.
Ezi zifundo Bahlelwe 'kuKhokelwa' kunye 'nokuDibana'. Iintlelo ezisebenzisanayo zisenza sikwazi ukubona inyathelo ngenyathelo ukuba yenziwa njani inkqubo yokuhlela ifoto. Ukusuka apha siya kuHlelo ekwaBelwana ngalo kwaye oko kukuvumela ukuba wabelane nabani na ngezo ntlobo uzenza zikhethekileyo. Xa 'uzilayisha', i-Lightroom iyakukhathalela ukwenza 'ngaphambi nasemva' kocwangco ukwenza ukuba kubelula nakubani na ukuba ayidibanise nomsebenzi wabo wobugcisa.
Ezinye izinto ezinqabileyo kulawulo olutsha lwe ushicilelo lombala olufumanekayo njengolwasekuhlaleni, "iinguqulelo" kwaye zisivumela ukuba senze "unyango" olwahlukileyo kwimifanekiso, ukukwazi ukuseta useto lweefoto zeRAW, ukuseta kwangaphambili kwe-ISO, imvume yokudlulisa umfanekiso weLightroom ukusuka kwi-iPad ukuya kwiFotohop kwakwisixhobo esinye seApple, embindini ukunqumamisa ukugquma, kunye nokukwazi ukubeka i-watermark; kwaye ivela kwintsomi yezixhobo eziphathwayo.
Ungahlali kuphela Nazi iindaba zeLightroom, ke siyakukhuthaza ukuba uhlaziye inkqubo ukonwabela inguqulelo yayo entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Igumbi lokukhanyisa le-Adobe lihlaziywa ngokwabelana ngokwabelana, ulawulo olukhulu kuhlelo, nokunye okuninzi